गुरुले शिष्यलाई दिने ज्ञान झरनाले पानी दिएजस्तै
शिवकृपानन्द स्वामी–सद्भावना दूत (भिजिट नेपाल २०२०)
२०७६ जेठ २७ सोमबार ०६:५३:००
नेपाल पर्यटन बोर्डले शिवकृपानन्द स्वामीलाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को लागि सद्भावना दूत घोषणा गरेको छ । नेपालमा आएर अध्यात्मिक ज्ञान हासिल गरेका शिवकृपानन्द नेपाललाई केही गर्न भनी लामो समयदेखि सोचमग्न रहेको तर, नेपालले भर्खरैमात्र आफ्नो चाहना बुझेको बताउँछन् । उनी यसअघि गत मंसिरमा नेपाल आएका थिए । नेपालमा आएर आफूले ज्ञान पाएका कारणले गर्दा नै नेपालमा आएर ज्ञान बाँड्ने तथा ध्यान गराउने उनको भनाइ छ । भारत महाराष्ट्रको डान्डीमा शिवकृपानन्दको ‘समर्पण आश्रम’ छ ।
गुरुसेवाका लागि नेपाललाई योगदान गर्न चाहेको बताउने उनै शिवकृपानन्दसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेल र सौरभ रानाभाटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल आउँदा तपाईंलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
एकदमै खुसी छु । यो शिवको भूमि हो, मेरो गुरुको पनि । मेरा गुरुले यहाँ ४० वर्ष बिताउनुभयो । मैले पनि यहाँ आएर गुरुबाट ज्ञान लिएको हुँ, योभन्दा ४० वर्षपहिले म नेपाल आएको थिएँ ।
अध्यात्मको क्षेत्रमा तपाईं प्रवेश गर्नुको कारण र परिवेश कस्तो थियो ?
सानैदेखि मेरी हजुरआमाले ईश्वरलाई अविनासी भन्नुहुन्थ्यो । ईश्वर हिजो थिए, आज छन्, र भोलि पनि रहनेछन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले मैले सानैमा बुझेको थिएँ कि ईश्वर कुनै मान्छे होइनन्, शरीर होइनन् । म ईश्वरको खोजीमा निस्किएँ । मलाई कसैले पूजा गर भने, पूजा गरें । हवन गर भने, हवन गरें । पाठ पढ भने, पाठ पढें । तर, ईश्वर भेटिनँ ।
र, म ईश्वर खोज्दै–खोज्दै हिमालय आएँ । नेपालमा गुरु भेटें । गुरुले मलाई ईश्वरको अनुभूति गराएपछि ईश्वर खोज्ने मेरो यात्रा सम्पन्न भयो । गुरु कोही सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्नथ्यो । उहाँलाई भेटेपछि मेरो खोज अन्त्य भयो । जसलाई ईश्वर मान्यो, उही ईश्वर हुने रहेछ । मैले गुरुलाई भगवान मानें । गुरुलाई भगवान मान्दा हाम्रो समर्पणको भाव वृद्धि हुन्छ । उहाँलाई भगवान मान्दा मलाई सम्पूर्ण समाधान प्राप्त भयो । गुरुलाई मान्छे मान्नुस् या ईश्वर । कोहीलाई ईश्वर मान्दा मेरो परमात्मा पाएँ । मेरो अन्तमुर्खी यात्रा प्रारम्भ भयो । पछि मैले यो पनि बुझें कि परमात्मा मेरै भित्र छन् ।
यो बुझ्नु नै मोक्ष हो त ?
अन्तर्मुखी हुनु आत्मसाक्षात्कारको विषय हो । गुरुले शिष्यलाई आत्मसाक्षात्कार गराउँछन् । तपाईं मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनुभयो भन्दैमा डाक्टर बन्नुहुन्छ त ? बन्नुहुन्न । पढाई र अभ्यास गरेमात्र डाक्टर बन्नुहुन्छ । यसैगरी आत्मसाक्षात्कार मिलेपछि जीवनमा प्राप्त गर्न केही बाँकी रहँदैन । भित्रभित्रै आफैं प्राप्त हुन्छ । यसका लागि साधाना गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ । मोक्ष एउटा स्थिति हो, जीवनकालमा प्राप्त हुन्छ ।
अध्यात्मलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
अध्यात्मलाई बुझ्न पहिले धर्म के हो जान्न जरुरी छ । मान्छे धर्म र अध्यात्मलाई एकै ठान्दछन् । मिश्रण गर्दछन् । दुवै फरक हुन् । अध्यात्म भेट्न चढ्नुपर्ने सिँढी धर्म हो । अहिले हामी जे कुरालाई धर्म भन्दैछौं, त्यो धर्म होइन, उपासनाको पद्धति हो । सबैको उपासनाको पद्धति फरक हुन सक्छ । हाम्रो धर्म त एकै हो, मनुष्य धर्म । अरु उपासना पद्धति हुन् । अध्यात्म भेट्न जुन उपासना पद्धति अपनाए पनि हुन्छ ।
सिँढी समाप्त भएपछिको चरण अध्यात्म हो । जो जहाँ हुन्छन्, सोही कुरा गर्छन् । सिँढीमा भएकाहरु धर्मको कुरा गर्छन् । टुप्पोमा पुगेपछि धर्मले उनीहरुलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । उसले मनुष्य धर्म बुझिसकेको छ । म देशविदेश पुग्छु । तर, म हिन्दू भएपनि धर्मको कुरा गर्दिनँ । मैले हिन्दूको कुरा गरेँ भने उनीहरु क्रिश्चियनको कुरा गर्दछन् ।
मैले ध्यान सिकाउने बेला मेरा समीपमा क्रिश्चियन पादरी पनि हुन्छन् । उनी मसँगै सोफामा बसेका हुन्छन् । तर, उनले अनुभव गर्न सक्दैनन् । किनकि संस्कृतमा गुरुका समकक्षमा बसिँदैन । गुरुलाई माथि राखिन्छ किनकि गुरुको ऊर्जा माथिबाट तलतर्फ प्रवाह हुन्छ । उनै पादरी भुइँमा बसेर ध्यान गर्दा सो ऊर्जा महसुस गर्न थाल्छन् । लन्डनमा पनि एउटा प्रवचनको क्रममा सबै अंग्रेज कुर्सिमा बसेका थिए । तर, एकजना भलाद्मी भुइँमा बसेका थिए ।
यसमा कुनै धर्म आयो त ? उनको बुझाइमा कुनै उपासना पद्धति आयो त ? आएन ।
२१ जुनमा विश्वभर योग दिवस मनाइन्छ । सो दिन सबैजना योगासन गर्दछन् । सबैतिर योगासन देखिन्छ । तर, योगासनमात्र योग होइन । योगको क्षेत्र ठूलो छ । योगासन योगको एक अंग हो । यम नियम, प्राणायम, आसन, प्रत्यहार, धारण, ध्यान, समाधि आदि छन् । योगको चौथो अंग आसन हो भने सातौं अंग ध्यान हो । योग शारीरिक बनावट र निर्माणसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
मैले अध्यात्मबारे एउटा पनि पुस्तक पढेको छैन । तर, म अध्यात्मको कुरा गर्दछु । यो एकाउन्ट नपढेको मार्केटिङ म्यानेजरजस्तो भयो । तर, मैले मेरो अनुभवको आधारमा ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ । अस्ट्रेलिया जाँदा ५ जना योग गुरु मलाई भेट्न आए । उनीहरु सुन्दर थिए, तर चित्त कुरुप । मैले योग गुरु हुन चाहनुको कारण उनीहरुलाई सोधें । उनीहरुको जवाफ थियो, शारीरिक सुन्दरता विकास गर्न, फिगर बनाउन ।
घरमा हजुरआमा ऐना हेर्दा गाली गर्नुहुन्थ्यो । सोबेला म कारण बुझ्दिनँ थिएँ । अहिले आएर बुझ्दै छु कि यो शरीर नाशवान हो । यही नाशवान शरीर सुन्दर देखाउन चित्त लगाएपछि चित्त कुरुप हुने नै भयो । अस्ट्रेलियामा भेटेका योग गुरुहरु हुनुको कारण पनि सोही रहेछ । मैले बुझिहालें ।
मैले उनीहरुलाई शुद्ध आकाशतर्फ हेर्न आग्रह गरें ।
डाक्टर हरेक दिन कति बिरामीमा चित्त लगाउँछन् ? त्यसैले डाक्टरहरुको चित्त पनि अशुद्ध हुन्छ । दुनियाँमा सबैभन्दा अशुद्ध चित्त हुनेहरु डाक्टर र प्रहरी हुन् । दिनैपिच्छे बिरामी र अपराधीलाई भेट्ने कत्तिको शुद्ध होलान् र ? यी दुवै पेशामा लागेकाले ध्यान गर्न जरुरी छ । वास्तविकता पनि अनौठो छ । अधिकांश डाक्टर लामो आयु बाँच्दैनन् । किनकी डाक्टरको वरिपरिको वातावरण खराब छ । हृदयको बिरामी समीपमा बस्ने डाक्टर हृदयकै रोगी हुन्छन् ।
मैले भन्ने खोजेको योगासन र योग फरक हो । अहिले जस्तो बुझाई विकास भइरहेको छ, यसले अर्को पुस्तामा योग भनेको योगासन मात्र हो भन्ने सन्देश पुर्याउँछ । म विश्व भ्रमण गरेको छु, विभिन्न जाति, धर्म, भूगोलको मान्छेलाई भेटेको छु । मलाई मान्छे योगले भेटाएको छ । त्यसैले म भन्न सक्छु कि मान्छेलाई मान्छेसँग जोडाउने माध्यम योग हो ।
मैले धेरै देशको सरकार प्रमुखलाई भेटेको छु । उनीहरु देशभित्र जाति, धर्म, भेषका आधारमा द्वन्द्व देख्न चाहन्नन् । म उनीहरुलाई द्वन्द्व अन्त्य भएको देख्न चाहने कुनै तरिका सोध्छु । उनीहरु अनुत्तरित रहन्छन् । अनि म जवाफ दिन्छु, “ध्यान गर्नुस् । शरीरको विकार कम हुन्छ । सारा झगडा समाप्त हुन्छ ।” वास्तवमा सबै झगडा शरीरका कारण हो । शरीर भएका कारण जात, भाषा, धर्म, राज्य, सीमा सिर्जना भएको हो । शरीरभाव कम भएमात्र यी झमेला शान्त हुन्छन् ।
यसको एकमात्र उपाय ध्यान योग हो । सबैले आफूलाई आफू एक पवित्र र शुद्ध आत्मा सोच क्लेश अन्त्य हुन्छ, आफूसँग र अरुसँगको क्लेश ।
यसको अर्थ योगले चित्तको आवृत्ति हटाउँछ भन्न खोज्नुभयो ?
पक्कै पनि हो । तर, योग भनेको योगासन मात्र होइन । यसको सन्देश विश्वभरि पुर्याउन म लागिपरेको छु । योगका आठ अंगमध्ये अघिल्ला चार प्राथमिक अंग हुन् । र, समाधि अन्तिम अंग हो । जस्तै, माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न प्राथमिक शिक्षा पढेको हुनुपर्छ । र, प्राथमिक शिक्षाले मात्र केही उपलब्धि हुँदैन । योगमा पछिल्ला अंग पनि उस्तै हुन् । योगासन गरे मात्र योग हुँदैन । ध्यान पनि गर्नुपर्छ ।
म योगासनको विरोधमा छैन, योगासन पनि गर्नुपर्छ । तर, जसरी योगको सन्देश गइरहेको छ, त्यो सकारात्मक छैन । तपाईं ध्यान गर्दा शरीरले सबैभन्दा पहिले विरोध गर्दछ । किनकी शरीरलाई एकाग्र हुने बानी छैन । योगासनले शरीरमाथि नियन्त्रण गर्छ, ध्यान गर्न सहायता गर्दछ ।
तपाईंले सिकाउने गरेको ‘समर्पण मेडिटेसन’ के हो ?
समर्पण एक संस्कार हो । यो पद्धति होइन । मैले जैन मुनिहरुको एउटा शिविर लिएको थिएँ । जसमा उनीहरु तल्लीन रहे । र, शिविर सकेपछि उनीहरुले मलाई ध्यानका तीन पद्धतिबारे सोधे । त्राटक (एकाग्रता), भस्त्रीका प्राणायाम र श्वासप्रश्वासको उपयोग नगरी ध्यान गरेको उनीहरुले अनुभव सुनाए । ‘बिनापद्धति अरुलाई ध्यान कसरी सिकाउने ?’ उनीहरुले प्रश्न गरे । मैले भने, ‘यो ध्यानको पद्धति होइन, संस्कार हो ।’
गुरुका साथमा भएको ज्ञान गुरुले मलाई संक्रमित गरिदिनुभयो । अर्थात् ममा सो ज्ञान प्राप्त भयो । यो पद्धतिलाई समरस भनिन्छ । एकलव्य ऋषि द्रोणाचार्यसँग धनुर्विद्या सिक्न जाँदा द्रोणाचार्यले सिकाएनन् । त्यसो भएपछि एकलव्यले द्रोणाचार्यको प्रतिमा बनाए र उनीप्रति समर्पित भए । यसरी एकलव्यलाई पनि समरस प्राप्त भयो ।
मलाई कसैले संस्कृतका विद्वान भने । म आश्चर्यचकित भएँ । मैले उनलाई हिमालयमा गुरुप्रति आफू समर्पित भएपछि ज्ञान प्राप्त गरेको सुनाएँ । हामीबीच ज्ञानको लेनदेन पनि भएन । किनकी लेनदेन शरीरमा हुन्छ, आत्मामा हुँदैन ।
विज्ञान प्रयोगशालामा अंग्रेजी अक्षर यू आकारको ट्युबमा जसरी एकातिर पानी राख्दा अर्कोतिर सिफ्ट हुन्छ, गुरु–शिष्य परम्परामा पनि गुरुको ज्ञान शिष्यमा समरस हुन्छ । यो जेजति ज्ञान प्राप्तिका कुरा छन्, नैसर्गिक हुन् । झरनाको मुनि गएर बस्दा झरनाले भेदभाव गर्दैन । बाहिर बसेर झरनाको पानीले नुहाउन सकिँदैन । गुरु–शिष्यको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो । गुरुको समीपमा गएर विद्याको भिख माग्नुपर्दैन, आफैं प्राप्त हुन्छ ।
समर्पण ध्यानको संस्कार पनि पद्धति होइन, यस्तै किसिमको संस्कार हो ।
मानव जगत र विश्वशान्तिको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यी सबै भारी शब्दमात्र हुन्, जसको समाधान छैन । हामीले विश्वशान्तिको अर्थलाई गलत बुझेका छौं । मैले ध्यान गरेको छु, मेरो वरिपरि २५ फिटको मेरो ‘औरा’ कायम छ । यो २५ फिटको विश्व मेरो निजी विश्व हो । जहाँ गएपनि मेरो साथसाथ जान्छ । छायाले अँधेरोमा साथ छाडेपनि यो औराले छोड्दैन । मैले विभिन्न धर्म समुदायलाई ध्यान सिकाउँछु । सिंहको मुखमा हात राख्दछु । मलाई केही क्षति हुँदैन । म जहाँ रहेपनि मेरो आसपासको वातावरण एकै रहन्छ ।
विश्वको अर्थ निजी विश्व हो । म निजी विश्व बनाउन सक्छु भने, तपाईं किन बनाउन सक्नुहुन्न ? ३० मिनेट ध्यान गर्नुस्, भइहाल्छ । वातावरण खराब हुनेहरुले ध्यान गर्न झनै जरुरी छ । ध्यान गरेपछि निजी विश्वशान्ति प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि तपाईंलाई आम गतिविधिले कुनै प्रभाव पार्दैन । दुर्घटनामा पर्नुहुन्न, आत्महत्या गर्नुहुन्न ।
पन्छीको जन्म दुईवटा हुन्छ । एउटा अण्डाको क्रममा र अर्को बच्चा कोरलिने क्रममा । मान्छेको पनि त्यसरी नै दुई जन्म हुन्छ । एउटा आमाको कोखबाट शरीरको जन्म, अर्को गुरुबाट ज्ञान पाएपछि आत्माको जन्म ।
भर्खरै नेपाल पर्यटन बोर्डबाट तपाईंलाई गुडविल एम्बास्डर घोषणा गरिएको छ । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
मेरो आत्माको जन्म नेपालमा भएको हो । त्यसैले मलाई नेपालका लागि केही गर्न मन थियो । मैले गुडविल एम्बास्डरको रुपमा स्वेच्छिक योगदान गरेको हुँ । नेपालले मलाई यस्तो बनाए, नेपाल मेरो गुरु हुन् । मलाई चाहना छ नेपालको लागि केही सेवा गरुँ । म पछिल्लो २५ वर्षदेखि नेपाललाई योगदान गर्न चाहिरहेको थिएँ । तर, मलाई त्यो प्लेटफर्म मिलेन ।
जब पछिल्लो वर्ष नेपाल आउँदा उनीहरुले म नेपाललाई सहयोग गर्न तयार भएको थाहा पाए, मलाई गुडविल एम्बास्डर बनाइयो । म अपेक्षा बोकेर यहाँ कार्यक्रम गर्न आएको थिइनँ ।
अब आउने दिनमा नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ ?
नेपालले मलाई जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ, म तयार छु । तर, म कुनै आर्थिक लाभ बुटल्न चाहन्नँ । म नेपालका लागि होइन, म गुरुको लागि गर्दैछु । यही देशले मेरो गुरुलाई ४ वर्ष साधना गर्ने मौका दिएको थियो । मैले गुरुकार्य सम्झेर सहयोग गरेको हुँ । मैले गराउने साधना ‘समर्पण ध्यान’ विश्वभरि निःशुल्क छ । जसरी भगवानको प्रसाद निःशुल्क हुन्छ, यो ध्यान पनि निःशुल्क छ ।
आउने सेप्टेम्बरमा म फेरि नेपाल आउँदै छु । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग जोडिँदै छ । संसारभर रहेका नेपाली एक हुनेछन् ।
नेपाल अध्यात्मिक पर्यटनको हब बन्न सक्ला त ?
किन सक्दैन ? मैले यहाँ आएर अध्यात्म सिक्न सक्छु भने, अरुले किन सक्दैनन् । यसका लागि नेपालले केही गर्नुपर्छ । नेपालमा आध्यात्मिक शिविर सञ्चालन गर्न जरुरी छ । आध्यात्मका पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । ठूलो ध्यान गर्ने केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ । २०२० लाई भिजिट वर्ष घोषणा गर्दैमा पर्यटक कसरी आउँछन् ?
योजना बनाउनुपर्छ, प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । यहाँ युवाको संख्या धेरै छ । परिचालन गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, ध्यान गर्न के गर्नुपर्छ ?
ध्यान गर्दा केही अपेक्षा राख्नु हँुदैन । दैनिक ३० मिनेट ध्यान गर्नुपर्छ । ४५ दिनमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ, पैसा खर्च जरुरी छैन । ध्यान लागे पनि नलागे पनि ध्यान गर्नुपर्छ ।